I-MyAnimeList IS DOWN - Ingabe Ihlobene Nabalandeli BakaNux Taku? - Okunye
I-MyAnimeList PHANSI kwamahora angu-8 +, Abantu Bakholelwa ukuthi Abalandeli Be-Nux Taku Bazosola
MyAnimeList, ngokusho kweTwitter yabo ibilokhu yehlile kusukela ngo-5: 37 PM (UK Isikhathi).
Bathi kungenxa yokuthi isiza sabo singaphansi kokuhlaselwa okunamandla kwe-DDOS.
Besibhekene nokuhlaselwa okuqinile kwe-DDoS futhi ngeshwa kuyaqhubeka. Ithimba lethu lobuchwepheshe lisebenza ukubuyisela iwebhusayithi ngokushesha okukhulu. Ungahle uhlangabezane nemithwalo yamakhasi embalwa ephumelelayo elandelwa yimilayezo yesondlo noma amaphutha kuze kube yilapho isimo sesizinze.
- MyAnimeList (@myanimelist) Februwari 18, 2020
Okuxakayo - ngibonile LONKE USUKU ngomhlaka 18 kuFebhuwari Angikwazanga ukufinyelela ku-MyAnimeList.
Ngisho namanje lapho ngizama ukusebenzisa isayithi, yehluleka ukulayisha.
Futhi abahloli bezinsizakalo zewebhusayithi babika into efanayo.
i-anime elinganiswe kahle kunazo zonke isikhathi
Ukuphawula 'kolimi esihlathini' kukaMisty Chronexia kukhomba kuNux Taku
Ngiyethemba ujabulile ngawe @Nux_Taku Uphule iMAL. pic.twitter.com/gAUWMHpUUV
- Misty / 'Lickey-Lickey Boom-Boom' Chronexia & # x1f365; (@NomzamoMbatha) Februwari 18, 2020
Akuyona nje i-anime YouTuber: Misty Chronexia oyikholwayo
Umbuzo: Ngabe uNux angamangalelwa ngalokhu?
Njengo, idk ngesizathu esithile esimangazayo njengokukhuthaza ukuhlaselwa kwe-DDoS nomsebenzi onobungozi ku-MAL ngaphandle kwenhloso yobugebengu noma okuthile.
- Intandokazi (@Sentilusional) Februwari 18, 2020
Dambisa it fanbase kaNux!
- Thorf (@ Thorf98) Februwari 18, 2020
Sethemba ukuthi lesi sehlakalo sehlukile kunaleso esine-Interspecies Reviewers. Uma kungenjalo, futhi lokhu kungukuziphindiselela, kungaba isenzo sobuntwana futhi esingenanhlonipho. Yebo, konke kumnandi nemidlalo ukuzama ukuthola uchungechunge oluthandayo ku- # 1. Kungenye ngokuphelele indaba yokugenca isiza
ucezu oluhle kakhulu lwe-anime yamahlaya
- UHitori Samishiku (@SamishikuHitori) Februwari 18, 2020
Ingabe lokhu kungenxa yalowo mfo we-nux nabalandeli bakhe? Vele ubheke ividiyo yakhe futhi uzwakala enosawoti omkhulu nge-MAL. Angisasiqondi isikhalazo salaba bantu abasha be-anime, kungani abantu abaningi benesifiso sokulalela umbono womfana othile ongahleliwe.
- Rin (@Conrart_fan) Februwari 18, 2020
Kodwa abanye abantu okungenani bayazi ukuthi akulona iqiniso lelo
Kuyahlekisa ukuthi abantu abaningi lapha bacasuke kakhulu ngesehlakalo sakamuva, empeleni bacabanga ukuthi 'ukuziphindisela kwe-nux' noma okuthize & # x1f602;
- Miki Naz (@mikinazz) Februwari 18, 2020
Kepha kuhlale kufanele kube nalo mlandeli 'oyedwa' okhuluma into engekho njengale
Lokhu bekungeke kwenzeke uma uvele washiya izibuyekezo ze-Ishozoku zodwa. @NomzamoMbatha wayeqinisile ngawe.
- Angikutsheli (@LordKaizen) Februwari 18, 2020
Izwi lesizathu elivela eqenjini le-MAL
Cha! Konke kuphephile. Amaseva ethu asagcwele izicelo njengamanje ezivela kumuntu onobungozi, okwenza kube nzima ngathi ukuthi sixhume.
- Kineta (@AlliKina) Februwari 18, 2020
Njengoba sikwazi ukubona - abantu bakushaya lokhu kungalingani.
Abantu abaqapheli ukuthi amawebhusayithi ahlala kangaki ziyahlaselwa nsuku zonke.
Eqinisweni - njengoba sikhuluma, iMecha Company ihlaselwa cishe njalo ngomzuzwana ngandlela thile. Hhayi ezingeni lokuhlaselwa kwe-DDOS.
Ake ucabange ukuthi iwebhusayithi efana ne-MAL ibhekana nani njengamanje ngoba yokuhlaselwa kwe-DDOS.
Ukwehlisa iwebhusayithi amahora angu-8 + kungumonakalo odalekayo
Sawubona, noma yikuphi ukubuyekeza? Sekuphele amahora angu-8 manje!
- Tsu_long (@gorgon_is) Februwari 19, 2020
Kubonakala kanjalo amawebhusayithi e-anime entshonalanga njengo:
I-Anime News Network
Futhi manje iMyAnimeList
Ingabe konke kube yizinhloso zokuhlaselwa ngandlela thile emlandweni wabo.
uhlu lwe-anime oluhamba phambili sonke isikhathi
Noma ngabe yisiphi isisusa - kusobala ukuthi umuntu unenkinga yakhe engeke ichazwe.
Umthombo wezindaba: Twitter.
I-MyAnimeList Drama Over Reviewers Ishuzoku
Izizathu Ezingaba 3 Zokuthi Ukusebenza Kukhanselwe Ababuyekezi Be-Ishuzoku
phezulu 50 anime sonke isikhathi
impilo ye-cowboy bebop ayiphupho nje
uhlu lwe-anime ebizwa nge-hulu 2017